तपाईका लागी यस्तो छ २०७५/०५/०३ गतेको राशीफल ! ज्योतिषले भन्छ आजै बाट सुरु गर्नुहोस यस्ता काम फलिफाप हुनेछ - सुदूरखबर डटकम
label समाचार प्रकाशक query_builder August, 18 2018
गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अपजस व्यहोर्नु पर्छ । यात्रा घातक बन्न सक्छ, सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा जानु हुँदैन । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । स्वास्थ्यप्रति समेत सचेत रहनु होला ।
नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । कृषिक्षेत्रमा भने अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नुपर्ला । नयाँ कारोवार वा साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय छ ।
पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । बन्दव्यापार र पेसाव्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । जग्गाजमिनको कारोवार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ । सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मानसम्मान मिल्नेछ ।
गायत्री मन्त्रको जप गर्दै गरेको समयमा यस्ता कुरा नहिल्यै नगर्नुहोला, नत्र हानी नोक्सानी हुने छ
दुर्लभ रुपमा पाईने एकमुखे रुद्राक्षको महिमा र वास्तविकता, के छ त रोचक तथ्य ? जानकारी लिनुहोस
बिहीबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै सुख,शान्ति संबृद्धी प्राप्त हुने
आफ्नो घरमा धन सम्पती भरीराश होस भन्न चाहानुहुन्छ भने घरमा यस्ता सामाग्री कहिल्यै नराख्नुहोला